दैनिक कति पटक कफि पिउने ? – Nepali Health
दैनिक कति पटक कफि पिउने ?
२०७५ असोज २० गते ८:५५ मा प्रकाशित
तपाईं कफी पिउँन कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्छ भने याद गर्नुस एक दिनमा चार कपभन्दा बढी नपिउनुस । बढी कफी पिउँदा निद्रा लाग्दैन । र, मानसिक तथा शारीरिक समस्या पनि बढाउन सक्छ । यसले मानिसलाई डर पैदा गर्ने र मुटुको धड्कन रोक्ने सम्भावना पनि बढाइदिन्छ ।
कफी धेरै पिउँदा स्वास्थ्यका लागि खतरा हुने ब्रिटेनको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न विशेषज्ञहरूका अनुसार कस्तो कफीमा कति कफिनको मात्रा हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन । त्यसैले हामीले थाहा नै नपाई कति कफिन लिइरहेका छौँ त्यसको जानकारी पनि हुँदैन । यसरी थाहा नपाई हामीले आवश्यकताभन्दा बढी कफिन खाइरहेका हुन सक्छौँ ।
गर्भवती महिलाले दिनमा दुई कपभन्दा बढी कफी सेवन गर्नु राम्रो हुँदैन । सो संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार कफिनको अत्यधिक सेवनले गर्भपतनको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसका साथै जन्मिएको नवजात शिशुको वजन पनि कम हुन्छ वा जन्मदैँ शारीरिक तथा मानसिक विकलांगता पनि हुन सक्छ ।
सूर्ति नियन्त्रण सम्बन्धि कानून बनाउन गण्डकी प्रदेश अगाडी
नेपालमा औषधिको कारोवार बार्षिक ४५ अर्बको
स्वास्थ्य मन्त्रालयका नयाँ सचिव बने रामप्रसाद थपलिया
फुटको संघारमा पुगेको हेल्थ अस्सिटेन्ट संघ पुन: एकजुट, १७ जेठमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
कर्मचारी समायोजन निर्देशक समितिको बैठक : स्वास्थ्यको विषयले प्रवेश नै पाएन
तीन महिना नपुग्दै स्वास्थ्यबाट सचिव घिमिरेको सरुवा
इपिलेप्सी रोग सम्वन्धी दुई दिने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
आयुर्वेदको पञ्चकर्म : के हो नस्य कर्म ?
७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा शुरु गर्दै सरकार
सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन सम्वोधन गर्न ‘एनडीएएन’को नयाँ विकल्प
हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, हेल्थ इन्सपेक्सन सुपरभाइजर पदको समायोजन